အပေးသူခိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အပေးသူခိုး
Posted by lyanmoeaung on Aug 28, 2010 in Creative Writing |0comments
“ ဟွား … ဟား ”
သန်းဝေခြင်းဟာ အိပ်စက်ခြင်းကို ဆာလောင်တဲ့ အရာတဲ့ ကျိန်းစက်စက်ဖြစ်နေတဲ့ မျက်စိ နှစ်ကွင်းကို လက်ဝဲလက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ရင်း
သူမအကြောင်း မထင်မှတ်ပဲ တွေးတောမိလိုက်တယ် ။ သူမနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမှောင်စာမျက်နှာတွေကို တစ်ရွက်ချင်း လှန်ခဲ့ ရတဲ့ ညတွေ သူခိုးကြီး ငတက်ပြားလို
ခြေသံမျိုး သူခိုးကြီး ငတက်ပြားလို ခိုးကြောင် ခိုးဝှက်လိုမျိုး ဒီ အတတ်ပညာတွေကို ဘယ်သင်တန်း ဘယ်ဆရာနဲ့မှ မသင်ရပဲ ကျွန်တော် သူမကြောင့် အလိုလို
လူတွေမသိအောင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လုပ်တဲ့ လူမျိုးကို လူတွေက “ သူခိုး ” တဲ့ ။ သူခိုးဟေ့ ဆိုရင် လူတွေအသိမှာ ဥစ္စာပစ္စည်း တွေကို ခိုးယူတတ်တဲ့ သူခိုး “ ပစ္စည်းသူခိုး ” ။ တစ်ခုပြောရဦးမယ် … နောက်တာတော့ မဟုတ်ဖူးနော် .. လူ ကိုသာ ခိုးယူတတ်တဲ့ သူခိုးကို “ လူ သူခိုး ” ပေါ့နော်
ကျွန်တော် ပြောတာ ဟုတ်ရဲ.လားဗျာ ? ကျွန်တော့ကို ကျွန်တော် မြှောက်ပြောရဦးမယ် ။ ကျွန်တော်ဟာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် အတတ်ပညာမှာ တစ်ခြား သူခိုးတွေထက် အစွမ်းထက်ခဲ့လို့ နိုင်ငံတစ်ကာ သူခိုးအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်တိုင် ကျွန်တော့် အတွက် “ ဒီပလိုမာ သူခိုးပြိုင်ဘက်ကင်း ဖလား ” ကို ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတယ် ။
သူခိုး ပြိုင်ဘက်ကင်း ဖလား ကို ရခဲ့ လို့ အထင်တော့ မကြီးလိုက်နဲ့ဦး ။ ကျွန်တော်ဟာ “ ပစ္စည်းနဲ့ လူ ” ကို ခိုးယူတတ်တဲ့ “ အယူ သူခိုး ”
ထဲ မပါဝင်ခဲ့ ဘူး ။ ကျွန်တော်ပါ လို့ ဆိုတဲ့ သူခိုးဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေကို ပြန်ပြီး ပေးပေး တတ်တဲ့ “ အပေးသူခိုး ” တစ်ယောက်ပါ …
“ အပေး သူခိုး …. အပေးသူခိုး ”
မြို.တစ်မြို. အလယ်ရှိ ကဖီး ဆိုင် တစ်နေရာ
“ ဟေ့ .. ညီလေး ”
“ ပေါ့ ဆိပ် တစ်ခွက် … စူပါ တစ်ခွက် ဆေးလိပ် တစ်ပွဲ လုပ်ကွာ ” တစ်ဖက် ၀ိုင်း တစ်ဝိုင်းရဲ. စားပွဲထိုး တစ်ယောက်ကို မှာသောက်နေသံ ကြောင့် ကျွန်တော့် အတွေး တစ်ချို. ဟာ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် လွင့်ပျောက်ခဲ့ ရတယ် ။ ညက အိပ်ရေး ပျက်ထားတာကြောင့် ငေါင်တောင်တောင်ကြီး
အတွေး ကမ္ဘာထဲ ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အခုမှပဲ ဆားထိတဲ့ တီကောင် တစ်ကောင်လို တွန့်လိမ် တွန့်လိမ်နဲ. ပြန်လည် အသက်ဝင်လာတယ် ။
မှာသောက်ထားတဲ့ စူပါ တစ်ခွက်တောင် အေးစက်တောင့်တင်းနေပြီပဲ .. အေးစက်နေတဲ့ စူပါကို ကြည့်ပြီး သူမကို ထပ်ပြီး သတိရမိပြန်တယ် .. ကျွန်တော်ဟာ သူမနဲ့ ပတ်သတ်ခဲ့သမျှ အရာအားလုံးကို စွဲလန်း ရူးသွပ်ခဲ့ရသူပါ ။
Super တစ်ခွက် EVD တစ်ခွေ ဒါတွေက ကြာခဲ့ပါပြီး … M.j ဆိုတဲ့ မွန်းကျပ်ကျပ် ကဖီးဆိုင်လေးရဲ. ညနေခင်းလေး တစ်ခုမှာ
super တစ်ခွက် ဆေးလိပ် တစ်ပွဲ ထိုင်သောက်ရင်း သူမကို ကျွန်တော် စတင်စွဲလန်းဖို့ အကြောင်း ဖန်လာခဲ့တယ် .. ကျွန်တော် ဟာ M.j ဆိုတဲ့ ကဖီးဆိုင်လေးရဲ. အရှေ. သစ်ပင်အောက် ခုံလေးတစ်လုံးပေါ် ထိုင်းရင်း ညနေခင်း တစ်ခုကို ပျင်းရိစွာ ဖြတ်ကျော် နေတုန်း ( ဝေါ …. ၀ူး ) ခပ်၀၀ မိန်းခလေး တစ်ယောက် ဆိုင်ကယ် မောင်းသွားတာကို အမှတ်တမဲ့ ငေးကြည့် နေခဲ့တယ် ..
အိမ်ရှေ. မှာ ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီး အိမ်ထဲသို့ တစ်ခုခု ကို အော်ပြော နေချိန် အထိ ကျွန်တော် ငေးကြည့်နေဆဲပါ .. ခြံတံခါးဖွင့်ပြီး
ခြံပြင်ထွက် လာတဲ့ ခပ်လှလှ မိန်းခလေး တစ်ယောက် … သူမကို စတွေ.စဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ကြီး ရေတွင်းထဲ ပြုတ်ကျသွားသလို
“ ပင်လယ်ရေတွေပဲ ချိုသလို ကွန်ပျူတာ တုပ်ကွေး မိသလိုလို ချောင်းဆိုး သလိုလို ဂစ်တာကိုပဲ မြင်းလုပ်စီးသလို ကျွဲလုပ်စီးသလိုလို ” ကျွန်တော် တွေးကြည့်မိတယ် .. မီးကို စတင်တွေ.ခဲ့တဲ့ သူဟာ
ကျောက်ခေတ် တစ်ခေတ် ရဲ. သူရဲကောင်းဆိုရင် အချစ်ကို သတိမပြုခဲ့တဲ့ အာဒံရဲ. နှလုံးသားဟာ
သူရဲကောင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး .. အာဒံရဲ. နှလုံးသားကို ပါရမီ ဖြည်.မယ့် တစ်ဦးတည်းသော သူဟာ ကျွန်တော်ပဲ ဖြစ်မှာပါ .. : P
အာဒံ ရဲ. ဧ၀ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဧ၀ ကကော အာဒံ အတွက် အချစ်ရှိရဲ.လား ? အာဒံ မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဧ၀ မဟုတ်တဲ့ သူမကို စတင် ရင်ခုန်မိပါပြီး
ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်နိုင်လောက်တဲ့ တစ်နေ့ ကျွန်တော် ဘ၀ အိုစာသွား တဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ဟာ သတင်း တစ်ခုကြောင့်ပါ ။
“ သူမ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသွားသင်တော့မယ်တဲ့ ” ကျွန်တော့် ဘ၀ တစ်ခုလုံး ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ကျွန်တော့ ရဲ. ခပ်စုတ်စုတ် ကွန်ပျူတာအိုလေး ပါ ဗိုင်းရပ်စ် မိသွားရတယ် ..
မလန်းဆန်း တော့တဲ့ နှစ်တွေ လတွေ ရက်တွေထဲ သူမအကြောင်းတွေးရင်း နှစ်သိပ့် လာခဲ့တဲ့ တစ်နေ့
“ သူငယ်ချင်း ဟိုမှာ လာနေတဲ့ ကားတစ်စီးထဲ Lady တစ်ယောက် ပါလာတယ် ” ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း LM ပြောမှ ကားဆီကို ကြည့်လိုက်မိတယ် ..
ဟင် ….. “ သူမ ပြန်လာပြီပဲ ” … ကျွန်တော့ ရင်တွေ ပူလိုက် အေးလိုက်နဲ့ နေပူမိုးရွာတဲ့ နေ့တစ်နေ့လိုပဲ အချစ် “ သူခိုး ”တွေ ခုနလေးကပဲ အသဲထဲ ၀င်ခိုးသွားပြီနဲ့တူတယ် ။
ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီးနဲ့ပေါ့ .. သူမ ပိုလှလာတယ်လို့ ကျွန်တော့် အမြင်ထဲ ထင်ယောင်မိတယ် .. မတွေ့တာကြာလို့ပဲလား
သူငယ်ချင်း LM က ကျွန်တော့် Lady ကို အသားညိုသွားတယ် .. ရုပ်ဆိုးသွားတယ်လို့လဲ ပြောရော ကျွန်တော် သူမကို ပိုချစ်မိသွားတယ် .. အခုတော့ ကျွန်တော့် ဘ၀ထဲ မိုးဥတုလေးလို ပြန်လည်စိုပြည်လာပါပြီး .. ကျွန်တော့ရဲ. ကွန်ပျူတာ အိုလေးလဲ သူပြန်ရောက်လာမှ ဗိုင်းရပ်စ်ဒဏ်က လွတ်မြောက်ပြီး အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်လာနိုင်ပါပြီး … သောက်နေကျ စူပါ လည်း ကဗျာ တစ်ပုဒ်နဲ့ ပြန်လည် ပူနွေးလာပါပြီး ။
ဒါပေမယ့် သူမ အကြည့်တွေ စိမ်းနေတယ် .. ဒါကြောင့် တခမ်းတနားနဲ့ ကျွန်တော့် ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်အံပြတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း LM က ၀မ်းချုပ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ “ အခုမှ တိုက်ပွဲ စတာတဲ့ ဘာလုပ်လုပ် တိုက်နိုင် သိမ်းနိုင်မှတဲ့ ” ဟုတ်လား .. အင်း ..
အခုမှ ရင်ထဲပေါ့သွားတယ် … “ တိုက်မှပဲ ”
အခွေ လွတ် တစ်ခွေပေးပါ … ကျွန်တော် အခွေလွတ်လေးတွေ ၀ယ်တာ ဘယ်နှစ်ခွေ ရှိမှန်း မသိတော့ဘူး …
အခွေလွတ် တစ်ခွေ ၀ယ်တိုင်း တိုက်ပွဲတစ်ခု ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှန်း ဗလာဖြစ်နေတဲ့ ဦးနှောက်က သိနေခဲ့တယ် . ကျွန်တော့်ရဲ. ရင်ခုန်သံ လက်တစ်စုံက ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ပေါ် တင်လိုက်ရုံနဲ့ နှလုံးသွေး တစ်ချို. dvd – drive နဲ့ အတူ အခွေလွတ်လေးထဲ စီးဝင်ခဲ့တယ် .. ငါ့ဘ၀ရဲ. အချစ်မှတ်တမ်း ဟာ ဒီ အခွေလေးတွေထဲ ပျော်ဝင်ရင်း သူမရဲ. ရင်ခုန်လာချိန်ကို မျှော်နေမှာပါ ။
နေရာလွတ်မရှိတဲ့ ရင်ခွင်ဆိုရင် လာရာလမ်းအတိုင်း မပြန်နိုင်ပေမယ့် သူမ အတွက်ဆို ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲ အားတင်းပြီး ပြန်ပေးရမှာပေါ့ ။
သူမနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ နောက်ကျရတယ် .. သူခိုး တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရတယ် .. တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့တဲ့ ညတိုင်း မီးပျက်တယ် .. ခမ်းချောက်တယ် ။
လာပါပြီး … အပေးသူခိုး ……
မဲမှောင်နေတဲ့ ညတစ်ည ရဲ. သန်းခေါင်ယံ အခါ လမ်းကျဉ်းလေး တစ်ခုထဲ “ သူငယ်ချင်း LM ဒီကိုလာ ဒီကိုလာ ” ကျွန်တော့် ရဲ. တကယ့် သူခိုးကြီး တစ်ယောက်လို လျှို.၀ှက် အတွင်းအား ထိန်းချုပ်မှု စနစ်၏ အသံဖြင့် ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း LM ဟာ သဘာရင့် သူခိုးကြီးတစ်ယောက် အတိုင်း “ ဟိုအမှောင်ထိုင် ဟိုနေရာကပ် ဟိုမြောင်းထဲဆင်း အကွက်ဖြင့် ကျွန်တော့် ဆီ ချဉ်းကပ်လာခဲ့တယ် ”
သူက ကျွန်တော့် ကို သူခိုးလေသံနဲ့ “ ye^ ye^ ခွင်ပဲကွ လှုပ်ရှားလိုက်တော့ ” သူငယ်ချင်း LM ရဲ. မြှောက်ထိုးပင့်ကော် မှုကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ရဲ. ကမ္ဘာ့ အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာ သူခိုးဖလား ရရှိခဲ့တဲ့ အပေးသူခိုး ညဉ် အတိုင်း ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် နည်းတစ်ခုထဲက မျောက်ကို ခါခဉ် ကိုသော စတိုင်ဖြင့် ဖင်ကိုပွတ်ကာ ပွတ်ကာ ဖင်ကို လှုပ်ခါ ပြီး အခွေကို သွားနဲ့ ကိုက်ပြီး စတင်လှုပ်ရှားဖို့ အသင့်ဖြစ်ခဲ့တယ် …..
“ အောင်မြင်ပါစေ သူငယ်ချင်း ”
လို့ ပြောလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ.အသံဟာ ကျွန်တော့ကို ထပ်ပြီး မိုက်ရူးရဲ ဆန်စေခဲ့တယ် ..
“ မိုးရွာတော့ မယ် မြန်မြန် ထားလိုက်တော့ လေ ” လို့ ကျွန်တော့်ကို အခွေထားဖို့ လက်မထောင် အချက်ပြတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်က
OK ပါ လို့ပြောရင်း ခြင်္သေအားမန် အပြည့်ထည့်ကာ မှောင်ရိပ်ခိုနေတဲ့ နေရာမှ မိချောင်းတွားသွားကာ ကျွန်တော့် ကောင်မလေးရဲ. အိမ်ရှေ.ရေမြောင်းထဲ ခုန်ချလိုက်ပြီးမှ မြောင်းထဲက ပြန်တက် … တစ်ဖန် မြောင်းဘေးရှိ ခရေပင်ပေါ် ထပ်မံတက်မိပြန်တယ် ..
“ ဟာ … ဘာလုပ်နေတာလဲကွ ” ဟု ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း က သတိပေးမှ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ရဲ. ဂန္တ၀င် စံတင် လွတ်နေတဲ့ အရူးစိတ်ကို ထိန်းပြီး အပင်ပေါ်မှ ဒိုင်ပင်ထိုးဆင်းကာ လေထဲမှာပင် ချီးညှစ်ကွက်ဖြင့် ကိုက်ထားသော အခွေကို မျက်စိမှတ် လိပ်ခေါင်းထွက်မတတ် အားကုန် မှုတ်ထုတ်လိုက်ရာ သူမ အိမ်ထဲသို့ တန်းခနဲ ၀င်သွားချိန်မှာပဲ
“ အောင်ပြီး .. အောင်ပြီး .. အောင်ပြီး … အောင်ပြီး ” ဟု သူငယ်ချင်းရဲ. အောင်ပြီး အော်သံက တကယ့်ကို ၇ နှစ်ရက်လောက် ထမင်း မစား ထားသော အသံ ထက် ကီးနမ့်နေ၏ ။
ခံနိုင်ရည် မရှိတော့ ဘူးကွာ .. ကျွန်တော့ ရဲ. ကျက်သရေ မရှိသော ညဉ်းညူသံကို LM က ဖင်လေထွက် ၀မ်းပျက်သော အသံ ဖြင့်
“ ဟာကွာ ” အချစ်ကို ခံစားချက်နဲ့ ခံစား ကြည့်မှ အချစ်ဟာ ရှိတယ်လို့ ငါ့ချစ်သူက ပြောဖူးတယ် .. ပြီးတော့ အချစ်မှာ ခံနိုင်ရည် မရှိတော့ရင် ရေစိမ်ခံ အချစ် .. အချစ်စစ် မရနိုင်ဘူးတဲ့ … LM ၏ မှော်ပညာ ဆန်ဆန် အချစ် ဒဿနတွေက ကျွန်တော့် ရင်ကို ထိုးဖောက်စေခဲ့တယ် …
လာကွာ M.j သွားရအောင် ….. ကျွန်တော့ရဲ. ခံစားချက်တွေ စူပါ နဲ့ ဖြေသိမ့်ခဲ့ဖူးတယ် …အချစ်ရဲ. ခါးသက်ခြင်းတွေကို စူပါ က သူ့ရဲ.
ကူပြီး ခံစားပေးတယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆခဲ့တယ်လေ .. ကျေးဇူးပါ စူပါ .. မင်းဟာ ငါ့ရဲ. သူငယ်ချင်းကောင်းပါ …
“ ye^ ye^ သောက်လေကွာ ဘာစဉ်းစားနေတာလဲ ” LM ပြောမှ သတိ ပြန်ဝင်လာပြီး “ အေးကွာ ငါသောက်မှာပါ ” ဆောင်းဘောက် က လွှင့်လာတဲ့
ထာဝရ ရင်မှာ နင်ပဲ ရှိတယ် .. ..ဆိုတဲ့ “ ဖော်ကာ ” ရဲ. အသံဟာ ရင်ထဲက အပူကို ထပ်ပြီး မီးပူထိုးပေးလိုက်သလိုပါပဲ … ကိုယ့်ရင်မှာ ငိုနေမိပြီကွာ .. ကိုယ့်ကို မနှိပ်စက်ပါနဲ. . ကျွန်တော်ဟာ တစ်ယောက်တည်း စိတ်ထဲကြေကွဲရင်း အချစ်ရဲ. နှိပ်စက်မှု ဒဏ်ကို ခါးစည်း ခံခဲ့တယ် …
“ ဒီ ည အခြေ အနေ ကောင်းရင် တိုက်ပွဲ ပြန်စ ကြမလား ”
ထိုအခါ LM က အဆီပြန်သော ရုပ်ဖြင့် “ စိန်လိုက်လေကွာ တဲ့ ”
ကျွန်တော့်ရဲ. မီးပျက်သော ညမှောင်မှောင်နဲ့ သူမ ရဲ. ရင်ဘတ်ထဲ ထိအောင် အပေး သူခိုး လုပ်ရဦးမယ် … .. . .. .
ဝေါ … ဝေါ … ဝေါ … ဂျိန်း .. .ဂျိန်း .. ဒုန်း . ဒုန်း
ဒရက်ကူလာရဲ. အော်သံနဲ့ တူတဲ့ မိုးချုန်းသံ … ကိုယ့်လက်ကိုယ်တောင် ပြန်မမြင်နှိုင်တော့တဲ့ ညရဲ. မိုက်ရိုင်း ရက်စက်နေပုံကို ကြည်.ပြီး
အိမ်မက်ထဲ သိန်းထီပေါက်ပြီး ဂေါက်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ. ပျော်ရွှင်ခြင်းမျိုးလို ကျွန်တော့ ရင်မှာ ၀မ်းသာလုံးဆို့ အသက်ရှုကျပ်ခဲ့ရတယ် ။
“ စာရေးပေးဦးလေကွာ ”
ကျွန်တော့်ရဲ. စကော လောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ ဦးနှောက်ကြောင့် LM ကို အကူအညီ တောင်းလိုက်တော့ LM က
“ မင်း Lady လေးကို အသည်း ဖောက်စားရအောင်တဲ့ ” ye^ ye^ မင်း ကျွတ်ကျွတ် အိတ် ရှာပေး …
ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး ကျက်သီးမွှေးညှင်း ထသွားခဲ့တယ် .. ဘုရား .. ဘုရား ဒီကောင် ဘာများ လုပ်ဦး မလို့လဲ .. ကျွန်တော့် အတွေး မဆုံး ခင် LM ရဲ့
Ok ဟုတ်ပြီး … ဆိုတဲ့ စကားလုံး ခပ်သေးသေး လေးတွေက ကျွန်တော့် ရဲ. ဦနှောက် ခပ်တုံးတုံးကြီးကို ထပ်ပြီး အဖတ်ဆယ် မရအောင် ရှုံးနိမ့် စေခဲ့တယ်
ကျွန်တော် သိတာကတော့ မိုးလေနဲ့ အတူ မှောင်မှောင် မဲမဲ ည အကြမ်း အရမ်းတွေကြား အချက်ပေးမထားတဲ့
ည ၁၁ နာရီအချိန် လောက်ဆို ကျွန်တော့် လို သူခိုး ကြီး အတွက် အပေးသူခိုးလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန် ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲ … ည ၁၁ နာရီထိုးဖို့ မိနစ် အနည်းငယ် သာလိုကြောင်း ရင်တွင်း သူခိုးဗီဇက နာရီ မကြည့်ပဲ သိနေခဲ့တယ် ..
ကျွန်တော် တော်တော် အံသြသွားတယ် … အံသြ စရာကောင်းလောက်အောင် LM ရဲ. လုပ်ကွက်က ကျွန်တော့ရဲ. တွေးမရတဲ့ အိမ်မက်ကိုဖြည့်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ ..
ဒိုးမယ် သူငယ်ချင်း … ဒီညတော့ ဒို့ လုပ်ကွက်ကြောင့် မင်း Lady ခံနိုင်ရည်ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး … LM ရဲ. လေခပ်ထွားထွားနဲ့ သူ့ရဲ. ထူးဆန်းတဲ့ လုပ်ကွက်ကြောင့် ကျွန်တော့် မှာလည်း ကျွန်တော့် Lady မျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်ရင်း ပြုံးလိုက်မိတယ် ။
သန်ခေါင်ယံ ညရဲ. သန်ခေါင်ယံ တည့်တည့် အချိန် အသက်မဲ့ နေတဲ့ ခပ်နွမ်းနွမ်း ခပ်စုတ်စုတ် လမ်းကျဉ်းလေးထဲ
၉ အ . ၉၉၉၉၉၉၉၉၉ နောက်ဆုံးပေါ် အနက်ရောင် mark-\_\_ ကားတစ်စီးဟာ ဂုဏ်သိက္ခာ အကျခံပြီး ၀င်ရောက်လာတယ် .. ကျွီး ………….
ကား ဘရိတ် အုပ်သံနဲ့ အတူ ချက်ခြင်း ဆိုသလို ကားတံခါးဖွင့်ပြီး အနက်ရောင် ၀တ်စုံ နဲ့ လူနှစ်ဦး ဆင်းလာတယ် .. နေကာ မျက်မှန် တပ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ. လက်ထဲ တစ်ခုခုကို ထုပ်ထားတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် တစ်အိတ် သူခိုး မျက်နှာဖုံး စွပ်ထားတဲ့ ကျန်လူတစ်ယောက်ရဲ. လက်ထဲ ခွေ တစ်ခွေနဲ.
စာတစ်စောင် .. မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံသလို ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူလိုက်တဲ့ ခွေးတစ်အုပ်ရဲ. အူသံ မိုးသားတွေရဲ. ဒေါသတကြီး အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရွာသွန်းမှုနဲ့ လျှပ်စီး မိုးကြိုးတို့ရဲ. ဒေါသတကြီး အော်ငေါက်သံတွေ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ညဉ့်နက်နက် ညရဲ. အဖြစ်အပျက်တွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ .. လူနှစ်ယောက်ကတော့ အေးဆေးပါပဲ ….
နေကာမျက်မှန်နဲ့ လူက သခိုးမျက်နှာဖုံးစွပ်နဲ့လူကို လက်တစ်ဖက် ထောင်ပြလိုက်ရင်ပဲ
“ ဖတ် .. ဖတ် .. ဖတ် ” အိမ်ရှေ. ခရေပင် အိမ်တစ်အိမ်ရဲ. ခြံဝင်တံခါးဘောင်နား ဖားခုန်ခုန်ပြီး တိုးကပ်သွား၏ .. လက်ထဲက ခွေ တစ်ခွေနဲ့ စာကို ခြံထဲ ပစ်ခဲ့ပြီး နေကာမျက်မှန်နဲ့ လူဆီ နောက်ပြန်ခုန်ပြီး .. ပြန်ရောက်လာကာ နေကာမျက်မှန်နဲ့ လူကို
“ အားလုံးကွက်တိပဲ မင်းပဲ လှုပ်ရှားတော့ … သတိထား ”
သူခိုး မျက်နှာဖုံး စွပ်နဲ့ လူရဲ. သတိပေးစကားကို ခေါင်းညိတ်ကာ မျက်မှန်နဲ့ လူ စတင်လှုပ်ရှား နေပြီး …
ခြေတစ်လှမ်း စလှမ်းနေ ပြီ …. ယင်း ခြေလှမ်းမှာ ခွေးလိုက်လို့ ပြေးတဲ့ ခြေလှမ်းမျိုး မာန်တစ်အားပါသည် …
ခြံဝင်နားအရောက် အလွန်လျှင်မြန်တဲ့ သိုင်းသမား တစ်ယောက်လို လက်တစ်ဖက်လှုပ်ရှားလိုက်တော့ လက်ထဲ အထုပ်တစ်ထုပ်ပါလာပြီး .. အထုပ်ကို သံပန်း ခြံတံခါး တစ်ခုမှာ လှမ်းချိတ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် … တစ်ခုခုကို တိုက်မိပြီး လျှော်ကြေးမပေးနိုင်လို့ ထွက်ပြေးတဲ့ ခြေလှမ်း မျိုးနဲ့ ပြန်လာရင်း
ဒိုးမယ် သူငယ်ချင်း ဒီညကတော့ တို့ နှစ်ယောက်လုံး အတွက် အေးဆေးပဲ
နံနက် ၈ နာရီ ခန့်
ဧည့်ခန်း တစ်နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ မိန်းခလေး တစ်ယောက်က ယောင်္ကျားလိုလို မိန်းမလိုလို နဲ့ လူတစ်ယောက်ကို
“ ဖေဖေ … မီးပျက်တဲ့ ညတွေတိုင်း အခွေတွေ .. စာတွေ လာထားတာ လူနှစ်ယောက်လို့ လမ်းထဲက လူတွေ ပြောပြောနေကြတယ် ”
သူတို့ ရဲ. ခွေလေးန့ စာလေးတွေက တော်တော် အဆင့်မြင့်တယ် .. သမီးတောင် သူတို့ ရေးရေးပြီး မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မဖြေနိုင်သေးဘူး
ကုလားထိုင် အစုတ်တစ်လုံးပေါ် ထိုင်နေတဲ့ ခပ်လှလှ မိန်းခလေး တစ်ယောက်က ကြမ်းပြင်ပေါ် ကောက်ရိုးခင်းပြီး သူမ၏ ဖခင်ထံ သို့ ပါးစပ်ပေါက်ပြဲပြဲကြီးနဲ့
လှမ်းပြောလိုက်ခြင်းပါ .. ထိုအခါ ဖခင်က “ ဒါလေးများ သမီးရယ် ဒီကောင်တွေ အဆင့်လောက်နဲ့ ငါ့သမီး ပညာတတ် နိုင်ငံခြားပြန်ကိုများ လာစမ်းနေသေးတယ် … ဒီကောင်တွေ လာစမ်းပါစေဦး .. မိအောင်ဖမ်းပြီး ဆွဲဖြဲပစ်လိုက်ဦးမယ် ..
ပါးစပ်ခပ်ပြဲပြဲ မိန်းခလေးက ဘီလူးရုပ်လို မျက်နှာရှိသော သူ့ဖခင်၏ မိန်းမလျှာလို အပြုအမှုနဲ့ ပြန်ပြောနေတဲ့ စကားအဆုံး
“ အဖေ ညက မိုးတွေက အရမ်းရွာတာပဲနော် .. ခွေးတွေလည်း အူလိုက်တာ ”
သမီး ဖြစ်သူ ပြောမှ မိန်းမလျှာ ဘီလူးကြီးက “ သမီး ခြံထဲ ဆင်းရှာကြည့်စမ်း ” ဟို အကောင်တွေ ညတုန်းက တစ်ခုခု ထားသွားပြီးထင်တယ် ..
ဟုတ်ကဲ့ .. ဟင် .. ဟယ် .. တွေ့ပြီး အဖေရေ … တွေ့ပြီး ..အရင်ညကလိုပဲ အခွေ တစ်ခွေနဲ့ စာတစ်စောင် နောက်ပြီး ခြံတံခါး ၀မှာလည်း ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ အထုပ်တစ်ထုပ် ထားသွားသေးတယ် .. ထိုအခါ ဘီလူး သံပရာရည်သောက်ထားတဲ့ ရုပ်နဲ့ လူကြီးက “ ဟဲ့ .. အိမ်ထဲ အကုန်ယူပြီး မြန်မြန်လာခဲ့ .. ”
မိန်းခလေးက လည်း အချောင်ရရင် ဘာမဆိုယူမယ့် ရုပ်နဲ့ “ လာပါပြီ .. အဖေရယ် ” ထို့နောက် အသက်ကြီးပြီး အချိန် မစီးတဲ့ ငပေါကြီးက “ စာကို အရင်ဖတ်ပြစမ်း .. အခွေကိုတော့ ငါဝယ်ပေးတဲ့ လက်ပ်တောပ့် နဲ့ နောက်မှဖွင့် ..”
ဖခင်၏ စကားကြောင့် သူမ၏ စကားကြောင့် မိန်းခလေးကလည်း သူ၏ တစ်ဖက်ပြူး တစ်ဖက်ကျဉ်း ဖြစ်နေသော မျက်စိဖြင့် စာကိုဖောက်ကာ ပြူးပြူးပြဲပြဲ အသံဖြင့်
အသဲ ကိုယ့်ရဲ. စာတွေဖတ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ. အခွေတွေကို ဖတ်ပြီး ရူးမသွားနဲ့ဦးနော် ..
ကိုယ်မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အသဲ တစ်ယောက်တည်း မဖြေနိုင်ရင် အသဲကျောင်းတတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားကို အကူအညီတောင်းပေါ့
အသဲက နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းလဲတတ်တယ် .. တခြား ဟို ဒင်း ဟိုဟာ တွေလည်း လုပ်မှာပေါ့နော် .. ( ကွန်ပျူတာဂိမ်းကိုပြောတာပါ )
ကိုယ့်ကို အသဲ တစ်နေ့ သိရမှာပါ .. ကိုယ်က အသဲတို့ အဆင့်လောက်ကို ဂရုမစိုက်ပါဘူး … အသဲကို ချစ်မိသွားတဲ့ အတွက်ကြောင့်သာ ကိုယ့်ရဲ. ဂုဏ်သိက္ခာတ၀က် အကျခံခဲ့ရတာပါ .. ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်က ရွှေဇွန်းကိုက်ပြီး မွေးလာတဲ့
ကိုယ့်ကို အသဲ ပြန်ချစ်ပေးပါလား .. အသဲ နဲ့ ဖုန်းဆက်ပြီး စကားပြောချင်တယ် .. အသဲ တို့ အဖေ ဆရာကြီး စားဖို့ အတွက် ကိုယ့်
သူငယ်ချင်းက ဘာတွေဝယ်ပြီး ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ထုပ်ပေးလိုက်လဲ မသိဘူး ..
အသဲကို နေ့တိုင်းသတိရတယ်ကွာ .. ဒါပဲ
စာလည်း ဖတ်ပြလို့လည်းဆုံးရော အဖိုးကြီးက
“ ဟာ .. ဒီကောင်တွေ သူဌေးသားတွေပဲ ငါ့ကိုလည်း ဆရာကြီးတဲ့ .. ငါစားဖို့ ဘာတွေများ ၀ယ်ပြီးထုပ်ပေးလိုက်လည်းမသိဘူး ”
ထိုသို့ တစ်ယောက်တည်း ပြောဆိုရင်း သူ့ သမီး ရင်ဘတ်တွင်ပိုက်ထားသော ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကာ အိတ်အတွင်းသို့ လက်ဖြင့် နှုက်လေ၏ ..
ဟေ့ကောင် ye^ ye^ အဖိုးကြီးတော့ ဘယ်လောက် တင်နေပြီးလဲ မသိဘူး .. တော်တော့ ကို စိတ်ဆိုးသွားမယ်နော် ..
သူငယ်ချင်း LM ရဲ. စကားကြောင့် ကျွန်တော်က ဟေ့ ကောင် LM အဖိုးကြီး စိတ်ဆိုး ရုံတင်ဘယ်က မှာလဲ .. သတ်တောင် သတ်ပစ်ချင်နေမှာ …
မင်းလုပ်လိုက်ရင် စောင့်ရမ် သက်သက်ပဲ .. ငါ့ကောင်မလေး ပါ ရောပြီး မုန်းသွားရင် ငါတော့ အဆွေးပဲကွာ .
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ လုပ်ကွက်ကြောင့် ကျွန်တော့် ကောင်မလေး အိမ် မှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေကြမလဲ
“ သမီးကိုလည်း ကျွေးနော် .. သူတို့ ထားသွားတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာ စားစရာတွေ အများကြီးပါမှန်း . အိတ်ကို ယူလာကတည်းက သမီးသိတယ် .. ”
အိတ်က အလေးကြီးပဲ ..
အိတ်ထဲ လက်နှိုက်နေသော အဖိုးကြီးကလည်း လက်ကို အိတ်ထဲမှ မထုတ်သေးပဲ စာမြုပ်ပြန်မယ့် ရုပ်နဲ့ “ ကျွေးမှာပါ သမီးရယ် ” စားစရာတွေက အပြည့် နီးနီးပဲဟာ .. တစ်ဝက်ကျွေးမယ် .. ဟုပြောကာ နှိုက်ထားသော လက်ကို အပြင်သို့ ထုတ်ပြီး စားရန် အလုပ်
“ ဟာ … ဟင် .. .. ချီး … .. .ချီး … .ချီး …… တွေ ” ဟု အော်ကာ မေ့လဲကျပြီး လေဖြတ်သွားခဲ့သည် … ထိုအခါ သမီးဖြစ်သူက ၀မ်းသာအားရဖြစ်ပြီး
အိမ်ပြင်သို့ ထွက်ကာ ချီးထုပ်ထားခဲ့သော ကျေးဇူးရှင် နှစ်ယောက် ကို ကျေးဇူးဆပ်ရန် မြို. အနှံ လိုက်ရှာလေ၏ ..
အကြောင်းမှာ သူမသည် သူမ၏ အဖေထံမှ ယောင်္ကျားယူရန် အတွက် အမွေ တောင်းလေရာ အဖိုးကြီးက
“ ငါသေမှ ရမယ် … ငါ မလှုပ်နှိုင်တဲ့ တစ်နေ့ .. ငါလေဖြတ်မှ ရမယ် ဟု စိတ်တိုပြီး ကျိန်းဝါးထားသောကြောင့် ”
ယခု သူမ အဖေ လေဖြတ်သွားအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ်တော်ချော နှစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးဆပ်ရန် မြို့ အနှံ လိုက်ရှာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
တချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ၏ ချီးထုပ်ကြီးသည် သူမအတွက် ရွှေထုပ်နဲ့ မလဲနိုင်ကြောင်း သတင်းဌာန တစ်ခုသို့ အီးမေလ်းဖြင့် ပေးပို့ခဲ့သည် ။
နောက်ဆုံးတွင် ကောင်မလေးသည် သူချစ်တဲ့ သူ နှင့် ညားသွားသည်
ကျွန်တော် နှင့် သူငယ် ချင်း ကတော့
ဟား … ဟား .. ဟီး .. ဟီး .. ဟိုး … ဟိုး .. ဟဲ … . ဟဲ
ဆက်ပြောရရင်တော့ အဖိုးကြီး တစ်ယောက် လူငယ် နှစ်ယောက်နဲ့ အတူ
ရို.ရို. .. အာ .. ဟာ .. အာ . ဟာ ..
ဟေ့ကောင်တွေ ငါ ကနေတာ ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား ?
……………………………………. သြော် ကျန်သေးတယ် .. သူ့ ချစ်သူ နဲ့ လက်ထပ်သွားတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ဘာကိုမှ မသိရှာခဲ့ ပါဘူး ………………………………..
လွှမ်းမိုးအောင် လမင်း has written 1 post in this Website..
View all posts by lyanmoeaung →